Kune zviuru zveeapps zvekusarudza kubva - akawanda, kutaura zvazviri, zvekuti zvinogona kunetsa kukwikwidza kuti ndeapi akakodzera kuyedza.
Kunyangwe iwe uri mushandisi ane ruzivo we iPhone kana mumwe munhu achangobva kusiya Android yeIOS, kutsvaga iyo yakakwana app ye, toti, kutumira email kana kutarisa mamiriro ekunze kana kunyora manotsi kana kutamba mutambo wekuzorora harisi basa riri nyore. Iwe une zvakawanda zvingasarudzwa, uye neApp Store inoshandisa kushambadzira mune mimwe mitsva yekutsvaga, zvakatonyanya kuoma kuona kuti ndeapi maapplication akanakisa.
Neraki, isu paPocket-lint takaedza mamwe maapplication kupfuura iwe aunogona kufungidzira uye tanga tichishandisa iPhone kubva 2007. Dhawunirodha chero yeizvi, uye haunganyadziswe. Isu takaronga zvese nechikamu, saka zvinofanirwa kuve nyore kugaya.
Zvakanakisa iPhone zvishandiso
AR uye VR (isiri-mitambo)
Google Cardboard ndeye app inoshanda neGoogle Cardboard-inoenderana neVR mahedhifiri (anonziwo vataridzi) uye yako iPhone. Izvo hazvingobatsire iwe kumisa iyo Kadhibhodi inotarisa asiwo inosanganisira zvishoma VR zviitiko kuti iwe utange.
Edza izvozvi: Google kabhodhi
Iyi AR-powered app inokubvumira kuti unamate maGIFs kune iyo chaiyo nyika uye ugovane zvisikwa zvako neshamwari. Fungidzira uchidhonza mudenga nekati GIFs.
Edza izvozvi: Giphy Nyika
IKEA Nzvimbo inoita kuti iwe ugone kuona 3D, ichokwadi-kune-chiyero IKEA zvigadzirwa munzvimbo yako. Inosanganisira yakawanda yeKEA katarogu, semasofa nemacheya, uye zvinobatsira iwe kuti unzwisise zvirinani hukuru hwemidziyo, dhizaini, uye mashandiro mumba mako.
Edza izvozvi: Ikea Nzvimbo
AR inogona kukubatsira kuronga yako inotevera tattoo! InkHunter inoita kuti utaridze kuti ingataridzika sei tattoo pane rako ganda. Ingoteka chiratidzo pachako, uye unongedze yako kamera kamera pane chiratidzo, uye programu yacho inoratidza dhizaini pakona imwe neimwe.
Edza izvozvi: Muvhimi weinki
Kunyangwe Apple iye zvino ichipa Measure app zvakananga mu iOS, kune dzimwe nzira, dzinodikanwa MeasureKit, iyo ine mapfumbamwe maArm zvishandiso: Mutongi, Magnetometer, Trajectory, Nzvimbo Mesh, Marker Pin, Angles, Munhu Height, Cube, uye Chikamu.
Edza izvozvi: MeasureKit
Star Walk chirongwa chakakurumbira chekutarisa nyeredzi. Icho chinongedzo chinopindirana kune husiku mudenga, uchitevera kufamba kwako kwese munguva chaiyo-nguva uye uchibvumidza iwe kuti utarise pamusoro pemitumbi yekudenga ye200,000 uye uwane ruzivo kune chero chinhu chaunowana.
Edza izvozvi: Kufamba Kwedenga
Vuforia Chalk inosanganisa yehupenyu vhidhiyo, odhiyo, uye kugona kwemunhu ari kure kuregedza kwavo kuona kwehupenyu. Zviziviso zvinonamatira nenzira chaiyo kuzvinhu zvepasirese-nyika, kunyangwe kana vanhu vakatenderera. Fungidzira, semuenzaniso, uchishandisa izvi sehunyanzvi hwemunda.
Edza izvozvi: vuphoria choko
WallaMe inokutendera kuti utore mameseji uye uvanze munyika chaiye. Unogona kusiya meseji chero kupi, uye ivo vanongoonekwa kune shamwari dzako, asi iwe unogona kutsvaga mamwe akavanzika mameseji uchishandisa mepu interface.
Edza izvozvi: Wallame
Apple iCloud Drawa
Iyi iApple chairo gore rekuchengetedza sevhisi. Zvinyorwa, midhiya, uye maforodha aunochengetera muICloud Drive gara uchikwanisa kufambidzana neese maApple maApple, kuti ugone kuawana kubva kune yako iPhone, iPad, iPod touch, Mac, kana PC, uye paICloud.com. Iwe unowana 5GB yenzvimbo yemahara kutanga.
Edza izvozvi: iCloud Drive
Dropbox inokutendera kuti uchengete mafaera uye maforodha kune iro gore uye ugovagovana, tarisa maHTML, uye batana pamwe nevamwe, nezvose zvakaenzanirana zvakachengeteka pamidziyo yako yese - kuti ugone kuzviwana chero nguva, chero kupi. Iwe unowana 2GB yenzvimbo yemahara kutanga.
Edza izvozvi: Dropbox
Google Drive yakafanana neDropbox, iwe chete unowana 15GB yemahara kutanga, uye inonyatsotsigira zvese zvigadzirwa zveGoogle. Unogona kuona yako Google Mifananidzo kana maGoogle Docs mafaera, semuenzaniso, uye koka vamwe kuti vaone, vagadzirise, kana kusiya zvirevo.
Edza izvozvi: Google Drive
Kufambidzana uye hukama
Icho chirongwa chekufambidzana chakafanana neTinder. Chete, neBumble, vakadzi ndivo vanotanga kufamba kuitira kuti vese vashandisi vagadzire hukama nenzira ine ruremekedzo.
Edza izvozvi: Bhinya
OKC mapenzi ndeye zvese nehupfumi profiles, paunogona kuratidza off hunhu hwako uye zvaunofarira. Unogona kupindura zviuru zvemibvunzo nezve iwe, kana mashoma, uye iyo algorithm ichakubatsira iwe kubatana nevanhu vanogovana zvaunofarira.
Edza izvozvi: OKChenjera
Tinder inonyanya kufarirwa kufambidzana App. Izvo zvinoshanda seizvi: Mechi. Chat. Zuva. Unodhonzera kurudyi pamufananidzo weprofayiridzo / faira kuti ude mumwe munhu, kana kushandisa swipe yekuruboshwe chinhu kuti ipfuure. Kana mumwe munhu akakuda iwe kumashure, iwo mutambo, uyo waunogona kutaura naye.
Edza izvozvi: sorwonzi
Grindr ndeyekushamwaridzana pasocial network uye kutaura app yeungochani, bi, trans, uye queer vanhu. Haisi yakazara yakazara kana yakanaka se, toti, Tinder, asi ichiri iyo Nha. 1 sarudzo yenharaunda yeGBBTQ.
Edza izvozvi: Grindr
Acorn chirongwa chekudyara icho chinoisa pachako shanduko yako yekusiya. Izvo ndezve uyo novice investor uyo asinganzwisise musika.
Edza izvozvi: Acorns
Bvumidzwa nekukurumidza kuchikwereti chenguva pfupi (muUS) icho iwe chaunogona kushandisa chero kupi zvako pawebhu, kubva kuna Lowe kuenda kuWalmart!
Edza izvozvi: Simbisa
Coinbase ndeimwe yeakakurumbira cryptocurrency wallets inowanikwa, sezvo inotsigira huwandu hweakasiyana, kusanganisira bitcoin. Semuenzaniso, zvinoita kuti zvive nyore kutenga zvakachengeteka kutenga, kushandisa, chengeta, uye kugamuchira bitcoin, pamwe ne ethereum uye litecoin.
Edza izvozvi: Coinbase
Iwe pamwe wakaona kushambadzira. Ivo zviri pamutemo. Kiredhiti Karma inoita kuti iwe uone yako kiredhiti profile (pasina dinging yako kiredhiti), tora kiredhiti yekutarisa, tarisa zvakasarudzika mazano, nyangwe faira rako mutero mahara.
Edza izvozvi: Chikwereti Karma
Unoda kuwona kuti iwe unoshandisa sei mari yako? Mint ndiyo yemahara mari manejimendi uye yezvemari tracker app iyo inounza pamwechete yako maakaundi kubhengi, kiredhiti kadhi, mabhiri, uye mafambisirwo uye uone zvaunoshandisa uye kwaunogona kuchengetedza mari.
Edza izvozvi: Mint
Robinhood inoita kuti iwe utenge nekutengesa masheya uye nekutsinhana-mari inotengeswa pasina kubhadhara komisheni. Iwe unogona kutanga portfolio uye kuisa mari mumakambani ako aunofarira. Kufanana neAcorn, inoitirwa vatyairi vemari vanoda kutenga nekutengesa.
Edza izvozvi: Robinhood
Wakambokumbira amai vako kuti vatore chimwe chinhu kuchitoro? Neizvi, unogona kuisa mari ipapo ipapo muClass Cash wallet kana kubhengi account yake (panogona kunge paine mari diki dzakabatana). Iwe unogona kunyange kutenga uye kutengesa bitcoin neiyi app.
Edza izvozvi: Square Cash
Venmo yakafanana neClash Cash, asi ine musanganiswa wemagariro. Iwe unogona kuwedzera zvinyorwa kumabhadharo ako kuti vamwe vaone, uye nekuda kana kudhinda nyaya dzeshamwari.
Edza izvozvi: Venmo
Iyi ndiyo sequel app kune Odyseey Adventure. Iwe uno tamba chinzvimbo chechando chebhachi, kubhururuka kwakadzika kusingaperi, kwakanaka nzvimbo. Nepo Adventure ine vatambi pagomo rinotonhora, Odyssey inokanda mune mamwe mafuro uye renje nzvimbo.
Edza izvozvi: Alto's Odyssey
Clash Royale ishongwe yekumhanyisa mutambo umo iwe unogona kurwira vatambi vanobva kutenderera pasirese mune chaiyo-nguva mune ese 1v1 uye 2v2 Hondo. Chinangwa (maminitsi matatu mumutambo) kuparadza shongwe dzinopikisana pamwe ne "King tower".
Edza izvozvi: rwisana Remake
Uyu mutambo weHondo Royale kwaunokwikwidza uye kukwikwidza kuve wekupedzisira akamira mu100-mutambi PvP. Iwe unofanirwa kuvaka chivharo, kurwisa vadzivisi vako, uye kupona wakarebesa kuti uwane kukunda kwako.
Edza izvozvi: Fortnite
HQ Trivia yakakurumbira rarama mutambo wekuratidzira kwaunogona kuhwina chaiyo mibairo yemari. Mazuva ese, iwe unonamira muHQ live show kupindura Trivia mibvunzo, iyo kubva pane nyore kune yakaoma, uye uone kana iwe uchikwanisa kuhwina mari.
Edza izvozvi: HQ Trivia
Nekadhi iri battler, ndiwe gamba rinoshandisa makadhi ku "zvipfuramabwe, kudaidza vateveri, uye kubata kutonga" kwenzvimbo yehondo. Iwe unogona kusvetukira mukati, kuvaka dhizaini yako, kurodza hunyanzvi hwako, uye kurwira kubwinya muArena uye duel vatambi.
Edza izvozvi: Hearthstone
LEGO AR Studio ndeye AR app iyo inokutendera kuti utambe neyechokwadi LEGO matoyi uye isa munzvimbo yako chaiyo-yepasi. Iwe unogona kufambisa uye kumira pazvose, kudzidza zvakawanda nezve yako set, uye kuyedza kuitisa muvhi. Unodzora ruzivo rwese.
Edza izvozvi: LEGO AR Studio
Izvi zvinotevera ku Monument Valley ya2014. Iyo indie puzzle mutambo, uko chinangwa chiri chekutungamira Ro nemwana wake kuburikidza nemazes, Optical illusions, uye zvisingaite zvinhu kuti apedze iyo puzzle.
Edza izvozvi: Monument Valley
Mutambo uyu wakaisa nharembozha AR pamepu muna 2016. Inokutendera kuti uve Mudzidzisi anogona kutsvaga Pokemon mune chairo-nyika, zvakare kubata, kubata, kutenderera, nezvimwe. Iwe unogona kunyange kukwikwidza mu epic gym batts.
Edza izvozvi: Pokemon Go
Uyu mutambo weFortnite-seHondo Royal umo mune vatambi zana parachute kuchitsuwa chiri kure. Vatambi vanofanirwa kuwana nekukanda zvombo zvavo, mota, uye zvekushandisa, uye vakunde mutambi wese kuti ave wekupedzisira akamira.
Edza izvozvi: PUBG Mobile
Denga: Vana veChiedza
Famba mhiri kwemasango wakayaruka kuti ubatsire zvisikwa zvekudenga kuwana nzira yavo yekudzokera kumatenga mune iyi jaya-inodonhedza kusangana kwevanhu.
Edza izvozvi: Denga: Vana veChiedza
Miti ndeye indie puzzle mutambo apo mutambi anotsvedza akaverengerwa matiles pane gidhigeti kusanganisa anowedzera uye anowedzera matatu. Mutambo unopera kana pasina mafambiro akasara pane gidhi uye mataira anoverengerwa kwekupedzisira mubairo.
Edza izvozvi: Tatu
Harry Potter: Wizards Unite is augmented real (AR) mutambo wemafoni uyo anokuona wakanyudzwa muWizarding World. Iwe uchave muroyi kana muroyi, uchifamba pakati pemakanda, uchidzivirira iyo International Statute yeWizarding Chakavanzika kuti uve nechokwadi chekuti nyika inoramba iri chakavanzika.
Edza izvozvi: Wizard Kubatana
Clue inzira yeku tracker app iyo inoshandisa sainzi kuti ikubatsire kuwana maitiro mukufamba kwako kwekuenda kumwedzi, uwane zviyeuchidzo zvemunhu nezvenguva yako, PMS, ovulation, uye kubereka, uye tarisa zvese kubva pane zvaunenge uchiita kurovedza muviri.
Edza izvozvi: zano
Wakamboshuvira here kuti iwe uve mumhanyi? Wobva watarisa iyo yepamutemo Couch kune 5K yekudzidzira app! Inoti kana ukangoshandisa maminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu uchimhanya - katatu pasvondo kwemavhiki mapfumbamwe - unenge wakagadzirira kupedzisa yako yekutanga 20K (30-mamaira) mujaho.
Edza izvozvi: Nhovo ye5K
C25K ndeimwe Couch kusvika ku5K chirongwa. Kufanana nevamwe, inosangana nekumhanya uye kufamba, zvishoma nezvishoma ichivaka simba rako uye kusimba.
Edza izvozvi: C25K
Fertility Shamwari ndeimwe yekuberekesa tracker. Iyo ine yepamusoro ovulation Calculator, mwedzi yekuenda kumwedzi, chinyorwa chekubereka, uye nguva tracker. Chinangwa chayo ndechokubatsira iwe kuti uve nepamuviri, uine matanho ekuyedza kubata-pamuviri uye kuongororwa.
Edza izvozvi: Kubereka Shamwari
Headspace inotungamirwa kufungisisa app. Iyo basics kosi yakasununguka zvachose uye ichakudzidzisa iwe yakakosha nzira dzekufungisisa uye pfungwa. Mushure meizvozvo, nekunyorera, iwe unogona kuwana iyo yakazara Headspace kufungisisa raibhurari.
Edza izvozvi: Headspace
Rirase! chirongwa chekuderedza uremu. Iwe unongotora iyo app, isa chinangwa chako, uye nekutarisisa izvo zvekudya kuti uderedze uremu.
Edza izvozvi: Rirase!
MyFitnessPal, inosanganisirwa neApp Under Armour's maapplication uye nemidziyo, inobatsira iwe kuteedzera chikafu, kugadzira zvinangwa, danda rekurovedza muviri, uye kuwana rutsigiro.
Edza izvozvi: MyFitnessPal
Pocket Yoga ichakutungamira kuburikidza neyese Yoga chikamu. Iyo inopa akasiyana akasiyana neakaoma kuomarara uye inokubatsira kuti udzidze zvese zvingamuka.
Edza izvozvi: Pocket Yoga
Mumhanyi anobatsira avo imi neApple Watch kana inopfeka seFitbit tarisa ma Workout ako neGPS, isa zvinangwa, ona kufambira mberi, nezvimwe.
Edza izvozvi: Runkeeper
Iyi ndiyo imwe GPS inotsigirwa inomhanya app iyo inoita kuti iwe utarise kure, nguva, kumhanya, kukwirira, makorori akapiswa, uye mamwe ma stats.
Edza izvozvi: Runtastic
Kurara Kutenderera ndeye yakangwara alarm alarm iyo inoteedzera ako ekurara mapatani uye inosarudza kusvika riini kuti ikumutse iwe mune zvishoma kurara - yakasikwa nzira.
Edza izvozvi: Kurara Purogiramu
Strava Running neBhikwidzi
Strava haingobvumidze iwe chete kuongorora yako kumhanya asiwo zviitiko sekushambira, kukwira makomo, kuyambuka, kurovedza muviri, kusevha, yoga, nezvimwe.
Edza izvozvi: Strava Running neBhikwidzi
Iyo Mindfulness App
Ichi chirongwa chekufungisisa chine tsika yakatungamirwa, nguva dzakatarwa, zviyeuchidzo, uye matanho - kuti iwe ugone kuteedzera yako yekufungisisa rwendo.
Edza izvozvi: Iyo Mindfulness App
Kurumidza tarisa kana kutarisa chero chigadzirwa mumba mako uye uone kana izere nemakemikari ane chepfu uye ma carcinogen. (Yambiro: Unokatyamadzwa.) Ichi chishandiso chinokubatsira iwe kutenga zvakachena.
Edza izvozvi: FungaDhis
Zuva rega rega Yoga inopa anopfuura 500 asanas, mazana maviri anotungamirwa makirasi eiyo yoga, pilates, uye kufungisisa, makumi mashanu ekushongedza kurovedza zvirongwa, uye kunyange varairidzi mabasa.
Edza izvozvi: Daily Yoga
Funga nezve izvi seyakafambiswa runomhanya app, asi naro, iwe unonzwa zombies kumativi ako ose. Saka, pane chinhu chimwe chete chaunokwanisa kuita: Mhanya!
Edza izvozvi: Zombies Mhanya
Iyi ndiyo sevhisi yeApple yekunyorera mimhanzi yakavakirwa mumidziyo yayo. Nayo, iwe unogona kufambisa chero chero rwiyo rwawakamboda kunzwa.
Edza izvozvi: Apple Music
Apple's GarageBand inoshandura yako iPad ne iPhone kuita studio yekurekodha, kuti iwe ugone kugadzira uye kusanganisa mimhanzi - kana kutova DJ - uchiri kuenda.
Edza izvozvi: Garageband
Pandora ndeye yakasarudzika mimhanzi app iyo iri chaizvo redhiyo yedhijitari. Iyo inoita kuti iwe ugadzire zviteshi kubva pane ako aunofarira nziyo, maartist, kana mhando.
Edza izvozvi: Pandora
SoundCloud imhanzi uye yekuteerera yekushambadzira chikuva, neinopfuura mamirioni zana nematanhatu. Iyo inokutendera kurongedza odhiyo uye tsvaga mimhanzi mitsva, zvese munzvimbo imwechete.
Edza izvozvi: SoundCloud
Spotify yakafanana neApple Music, chete haina kusungirirwa kuApple zvishandiso, uye kune freemium tier iyo inoita kuti iwe uterere kune zviteshi uye zvinyorwa zvekutamba zvine ads.
Edza izvozvi: Spotify
Uyu ndiye password password. Iyo inoyeuka zvese zvako mapassword kwauri, inoita kuti iwe ugadzire mapassword, uye nyore nyore kusaina iwe mumasaiti uye maapps.
Edza izvozvi: 1Password
Kuenda kune imwe nyika? Kana kungoda kutarisa murunyararo kumba? Neiri Anwendung, unogona kunakirwa nakavanzika internet yekuwana uye chengetedza yako Wi-Fi kubatana kune akasiyana siyana cyber kutyisidzira. Iko kune yemahara muedzo kutanga.
Edza izvozvi: NordVPN
Onion Browser ndiyo yekutanga yemahara uye yakavhurika-sosi Tor-poweredwa webhu saiti iyo inokubatsira iwe kuwana internet nekuchengetedza kwakawanda uye zvakavanzika.
Edza izvozvi: Anyanisi browser
Isu tese tinoziva kuti chii Amazon - uye neapp iyi, unogona kuitenga zviri nyore kubva pafoni yako. Izvo zvinokutendera iwe kuwana Alexa uye kuongorora zvigadzirwa.
Edza izvozvi: Amazon
Iyo ASOS app inoti inogara kune zvinopfuura mazana masere ezvituru zvezvigadzirwa uye zvinodarika 850 zvigadzirwa (kunyanya zvipfeko). Iyo inopa yakasununguka kutakura uye kudzoka sarudzo.
Edza izvozvi: ASOS
Unofarira kutenga kana kubhururuka nemaoko emawoko, mazambiringa, uye imwe-ye-ane-mutsa zvinhu? Ipapo iwe unofanirwa kushandisa Etsy.
Edza izvozvi: Etsy
Houzz ndiyo yako-kumira shopu yekuvandudza nekugadzira imba yako. Tarisa mifananidzo inokurudzira, tarisa uye utenge zvigadzirwa, hire uye ushande pamwe nevashandi, wana zano, verenga zvinyorwa, uye zvakawanda neiyi inobatsira imba yekushongedza app.
Edza izvozvi: Houzz
Unoda kuongorora IKEA yazvino chigadzirwa katarogu, gadzira mamodheru bhodhi, uye kuyedza IKEA fanicha munzvimbo yako? Usatarisa kumberi.
Edza izvozvi: IKEA chinyorwa
Kuwedzeredza kwakafanana neAmazon, asi iri Overstock, zviripachena. Chitoro kutengesa, edza fenicha muAR, tarisa-kunze neApple Pay, uye nezvimwe.
Edza izvozvi: overstock
Iyi Anwendung inoita kuti utengese chero skrini kuti ugadzire zvirinani zvioneke zvishoma. Mukuita, haina kukwana, asi pfungwa yacho ichiri kushamisa.
Edza izvozvi: ScreenShop
ShopStyle inoita kuti iwe utenge zvipfeko, shangu, shangu, uye mbatya dzese - kubva kune angangoita zvigadzirwa zvese zvawakambonzwa nezvazvo.
Edza izvozvi: ShopStyle
Kana zvinhu zvemumba chiri chinhu chako, Wayfair anoti inogara sarudzo yepasirose yezvinhu zvepamba - nemitengo iri kubva pane yakachipa kusvika kuwow. Iyo zvakare ine nyowani 3D View muKamuri ficha iyo inoita kuti iwe uone chaiwo zvinhu munzvimbo yako.
Edza izvozvi: Wayfair
Love eBay? Ipapo iwe uchada iyo eBay app. Inoita kuti ushandise kamera yako kutsvaga zvinhu, kuongorora barcode, uye kubata yako account.
Edza izvozvi: EBay
Muridzi wefoni? Ipapo iwe unoda iyi app kuti uimise, itarise chimiro chako, uwane hunyanzvi, uye uite chero chero chinhu chine chekuita ne Alexa.
Edza izvozvi: Amazon Alexa
Izvo zvinonzi Alexa app kune Alexa zvishandiso, iyo Google Kumba app ndeye kuGoogle Kumba uye Chromecast zvishandiso. Icho chinofanirwa-kuve chevashandisi veMubatsiri.
Edza izvozvi: Imba yeGoogle
Iyi iApple smart app kumba, yakavakirwa zvakananga muIOS. Ishandise kudzora zvese zvako zvekushandisa, isa yako smart imba pane autopilot, uye zvimwe.
Edza izvozvi: Apple Imba
IFTTT haibatsiri izvozvi nekuti Apple ine iyo Shortcuts app, asi nayo, unogona kunyatsobatanidza nekuita mabasa ako ose epamhepo.
Edza izvozvi: IFTTT
Ipfupi idzo Apple yakavakirwa-mukati iOS chishandiso icho chinoita kuti iwe uwane zvirinyore mabasa zviitwe nemaapps ako. Semuenzaniso, Apple yakati unogona kuvaka "Surf Nguva" nzira pfupi iyo inobata iyo surf ripoti, inopa ETA kumahombekombe, uye inotangisa mimhanzi yako yekutamba.
Edza izvozvi: Shortcuts
Mabhuku, audiobooks, uye podcasts
Iyi iApple yakavakirwa-mukati iOS Podcast app iyo inoita kuti iwe utore odhiyo nyaya. Iyo inopa anopfuura zviuru zvishanu nemazana mashanu ezviuru zvinoratidza nezvidimbu zvemamirioni gumi nemapfumbamwe.
Edza izvozvi: Apple Podcast
Inonzwisisika, kambani yeAmazon, inoti ndiyo sarudzo huru yemavhidhiyo mabhuku. Unogona kutenga uye kuvateerera pamwe neiyi App.
Edza izvozvi: Inonzwisisika
Breaker imwe nzira yePodcasts, asi inongova nemakumi matatu emadhora podcasts anowanikwa. Izvo zvakare zvinokutendera kuti utevere shamwari dzako uye nekudhanha zvinhu.
Edza izvozvi: Breaker
Unoda kuongorora zviuru zana zvemadhijitari edhisiki uye mifananidzo yemifananidzo? App iyi ine mazita kubva kuMarvel, DC, Image, nezvimwe.
Edza izvozvi: Comixology
Google Play Bhuku rebasa rinokutendera kuti utarise mamirioni emazita emazita emabhuku, kubva kuma audiobooks kuenda kuebook, uye kunakidzwa nawo, ese munzvimbo imwechete yepakati.
Edza izvozvi: Mabhuku eGoogle Play
Amazon's Kindle Reader inoita kuti iwe utore yako iPhone ive Kindle. Iyo inokutendera iwe kurodha pasi uye kutakura ebook rako rese pamwe newe, chero kwaunoenda.
Edza izvozvi: Kindle Reader
Kobo ndeyeimwe ebook uye redhiyo chitoro, ine mazita anopfuura mamirioni matanhatu kusarudza kubva. Inoita kuti uterere uye uverenge mabhuku, zvakare.
Edza izvozvi: Kobo
Maiziva here kuti raibhurari yako yemunharaunda ine zviuru zveebooks uye audiobooks? Unogona kuvakweretesa, ipapo, kwemahara, uchishandisa Libby.
Edza izvozvi: Libby
Overcast ndeye "yemazuva ano, yakazara yakatarwa" podcast mutambi uyo ane chinangwa chekurega iwe zvirinani kudzora yako yekuteerera ruzivo, ine tsika playlists, yakadzikira zvinyararire, iyo intuitive interface, uye zvimwe zvakasarudzika maficha.
Edza izvozvi: kwidibira
Kana iwe uchitsvaga Anwendung iri ekudzidza mitauro mitsva, Duolingo isarudzo huru. Iko kune yemahara vhezheni, pamwe neDuolingo Plus tier, ye $ 9.99, iyo inodimbura ma ads uye inokupa iwe kugona kurodha pasi zvidzidzo zvekudzidza pasina kuita.
Edza izvozvi: Duolingo
Iyi i-nyore-kushandisa mutauro kudzidza App ine nevaraidzo yevhara. Dzidza zvese kubva kuFrench kuenda kuNorway.
Edza izvozvi: Memrise
StudyBlue ibhuku rewekuunganidza mabhuku rekubatsira kuti ubvunze bvunzo. Iyo ine anopfuura mamirioni vadzidzi uye anopfuura mazana mashanu emamiriyoni flashcards.
Edza izvozvi: StudyBlue Flashcards
Yakagadzirirwa "kufudza yako yekuda kuziva uye kuwedzera yako nyika", ichi chishandiso chine anopfuura 3,000 emahara mavhidhiyo kubva kune anonyanya kushamisa vanhu venyika.
Edza izvozvi: NATED
Kunyangwe iwe uchida kuita epamusoro-chikamu masvomhu kuverenga kana kutsvaga kwechokwadi uye manhamba, WolframAlpha yakakosha kuyedza. Icho chinhu chakakosha chishandiso chekutsvaga ruzivo pamasvomhu, sainzi, uye mimwe misoro.
Edza izvozvi: Wolfram Alpha
App yeApple TV
Iyo Apple TV App inoita kuti iwe utarise zvemukati kubva pamusoro peanopfuura zana masevhisi evhidhiyo. Iwe unowana mafirimu uye zvinoratidzwa, live mitambo, uye nhau. Inowanikwa pane iPhone, iPad, uye Apple TV - kuti iwe ugone kutarisa kumba kana kana uchinge wabuda uye nezve.
Edza izvozvi: App yeTV
NeHBO Zvino, unogona kutarisa episodhi dzatinofarira dzenhaurwa yeHBO (funga Game yeTrrones neWestworld) yemari yekunyoresa yemwedzi.
Edza izvozvi: HBO Zvino
Hulu inopa raibhurari yakazara yemamuvhi nemabhaisikopu (kusanganisira Seinfeld, South Park, uye Kutya Kufamba Kwakafa) pamwedzi wekunyoresa. Kuti uwane mumwe mutengo, iwe unowana anopfuura makumi mashanu ehupenyu chiteshi, seABC, NBC, CBS, uye ESPN.
Edza izvozvi: Hulu
IMDb, kambani yeAmazon, ndiyo ine simba kune zvese-zvinhu Hollywood. Tsvaga mafirimu akakurumbira nematerevhizheni eTV nemakadhivhesa avo, uye uwane mukana wekutakura, kuseri kwezviyo zvidimbu, uye nguva dzekuratidzira (pamwe nekutenga matikiti) pedyo newe.
Edza izvozvi: IMDb
Netflix ndiye mambo wekutenderera masevhisi. Kuti ubhadhare pamwedzi, iwe unowana mukana weNetflix Mavambo, kuwedzera mamwe mafirimu akawanda nemafirimu.
Edza izvozvi: Netflix
Prime Vhidhiyo inosanganiswa neyeAmazon Prime kunyoreswa. Nayo, iwe unosvika kuAmazon mavambo, kuwedzera mamwe mafirimu akawanda uye mashowa.
Edza izvozvi: Prime Video
Kunge Hulu's Live TV inopa, YouTube TV inopa tambo-yemahara live TV, kuti iwe ugone kutepfenyura huru nhepfenyuro uye network, kubva kuABC kuenda kuESPN. Iyo zvakare ine gore rekuchengetedza, uye iri pamwedzi yekubhadhara-se-iwe-kuenda nhengo iwe yaunogona kukanzura chero nguva.
Edza izvozvi: YouTube TV
YouTube ndiyo sosi yekutanga yevhidhiyo yepamhepo. Chishandise kuona runako Tutorials, mitambo hova, mumhanzi mavhidhiyo, uye zvakawanda - zvemahara, nezviziviso.
Edza izvozvi: YouTube
Tora kutumira chikafu (chemubhadharo) kubva kumaresitoreti ako aunofarira uye kuwana menyu anopfuura 110,000 mumaguta 800+ muUS.
Edza izvozvi: Doordash
Grubhub yakafanana neDoordash, kunyange ichivimbisa kuve ne "sarudzo hombe yekutengesa" - kubva kuKFC kuenda kune yako yemunharaunda burger haunt.
Edza izvozvi: Grubhub
Iyi Anwendung ine maresitorendi anopfuura zviuru zvina makumi mana nepfumbamwe. Ndiwo akakodzera mafambiro ekutsvaga ekutsvaga maresitorendi emunharaunda uye kubhuka kuchengetedza.
Edza izvozvi: OpenTable
Pamubhadharo mudiki wekunyorera, unogona kuodha chikafu kubva kune chero nzvimbo yekudyira inotsigirwa padyo - uye kunyange zvigadzirwa kubva kuchitoro chemuno.
Edza izvozvi: Vanotumira
SaGrubhub naDoordash, Seamless inoita kuti iwe usvike kumamenyu emuno, nekukurumidza, nyore kuodha online. Asi inongowanikwa muNew York City.
Edza izvozvi: Seamless
Hara? Tora chikafu chaunoda, kubva kumaresitoreti aunoda, anotumirwa neUber, uye unogona kutoteedzera odha yako mune chaiyo-nguva.
Edza izvozvi: Uber Eats
Kana iwe ukashandisa Facebook, iwe zvechokwadi unoshandisa Messenger. Asi inogona kusungirwa kune yako nhamba, ichikubvumira iwe kutumira mameseji mune yako shamwari shamwari kana vanobatika. Iwe zvakare unogona kuita hurukuro dzevhidhiyo, kupedzisa nezvinosetswa, kutamba mitambo, kuwana biz chatbots, nezvimwe.
Edza izvozvi: Facebook Messenger
Mune toni yezvikwata zveboka? Boka reMe zvinoita kuti zvive nyore kuchengeta mbiri dzese. Iwe unogona kudoma mazita mapoka, kushandisa maavatat, uye chengetedza mifananidzo yako nemavhidhiyo mukati meboka chats.
Edza izvozvi: BokaMe
Discord chirongwa chekutaura icho chakazara muchinjika-chikuva, kuti ugone kuchishandisa kubva kufoni yako kana komputa yako, uye ine zvese maficha iwe zvaunotarisira kubva kune yekutaurirana app, kusanganisira neizwi kutaura. Iwe unogona kujoina mapoka kuburikidza nekubatanidza, futi. Iyo yose app inoitirwa vatambi, kunyanya.
Edza izvozvi: Kurwisana
Panzvimbo yekumirira kudzamara munhu wese agadzirira kufona, Marco Polo anoita kuti utore vhidhiyo yako uye utumire kana iwe uine nguva. Shamwari dzako dzinogona kuzviona ipapo kana kuzviona mumashure.
Edza izvozvi: MarcoPolo
Ne Signal, iwe unogona kutaurirana pakarepo nevese shamwari dzako kamwechete, uye kunyange kugovera media uye mamwe mafaera, uine zvakavanzika zvakakwana. Signal inoshandisa yekupedzisira-yekupedzisira-encryption protocol yemese meseji.
Edza izvozvi: Chiratidzo
Slack ndeyekutaurirana uye kubatana chirongwa. Yakagadzirirwa kunyanya kune mabhizinesi, ndeye inofanirwa-kuve nemutumwa wezvikwata.
Edza izvozvi: usimbe
WhatsApp iri yemahara mameseji app iyo inoshandisa foni yako internet kubatana uye yakasungirirwa kunhamba yako. Iwe unoishandisa kutumira uye kugamuchira zvakavharirwa mameseji uye mafoni. Iwe unogona zvakare kutumira mafoto, mavhidhiyo, uye meseji meseji.
Edza izvozvi: WhatsApp
Vhidhiyo ndeyeapp yaApple iyo inobvumidza iwe kuti uteme pamwe chete vhidhiyo yakabwinyiswa pasina kuyedza kwakawanda. Apple yatove inopa akati wandei ekugadzira mavhidhiyo maturusi, kubva kumusoro-kumagumo Final Cut Pro kune iMovie. Mavhidhiyo ndeimwe nzira, yemahara sarudzo.
Edza izvozvi: Apple Zvikamu
Pasina zvese zvinonetsa zvekutaura, Adobe Photoshop, FaceTune inoregedza iwe kuti ubatidze selfies kubva kune nyore kwe iPhone yako.
Edza izvozvi: Facetune
Google Photos inzira inokutendera kuti uchengete uye utore mafoto ako ese nemavhidhiyo, uye inogadzira kugadzira mifananidzo yehupenyu uye maGIF.
Edza izvozvi: Google Photos
PhotoScan iyi app kubva kuGoogle Mapikicha ayo anokubatsira kunyatsoita uye nyore nyore kuprinta mapikicha uchishandisa foni yako kamera.
Edza izvozvi: Google Scan
Ichi chakavanzika gem chakafanana neFaceTune, asi pane steroid. Hunhu hwayo hwakanaka uye hwakaringana kuchovha heck ichibuda muma selfies ako.
Edza izvozvi: Meitu
Adobe ine akati wandei ane chekuita nemifananidzo, asi isu tinofunga Photoshop Mix inonakidza nekuti ine mamwe emidziyo ine simba kwazvo ye Photoshop Izvo zvichiri kukumbira kune yakafararira akasiyana evashandisi, zvakadaro. Iwe unogona kugadzira akareruka macollage kana kuita yakawanda hardcore Photoshopping, chero yaunoda.
Edza Izvozvi: Photoshop Sanganisa
Kushambadzira Rashi CC
Iyi ndiyo mhinduro yeAdobe kuApple clip. Iyo inokutendera iwe kupfura, kugadzirisa, uye kugovana online mavhidhiyo, uye yakagadzirirwa mafupi-mafomu clip kutarisana neakareba iwo.
Edza izvozvi: Kushambadzira Rashi CC
Prisma ipikicha yemupepeti app iyo inogadzira zvinoshamisa mapikicha emifananidzo nekushandura mafoto ako kuita mapende uchishandisa inonzi inonzi filters.
Edza izvozvi: Prisma
Iyi yeAI-powered app inoshandisa tonne ye tech kuti irege chero munhu atore inopenya mirefu mifananidzo inoratidzwa.
Edza izvozvi: Camera Chairo
Apple iMovie app inowanikwa yeIOS neMac. Izvo zvinokutendera kuti utarise yako raibhurari yevhidhiyo uye ugadzire mafirimu nenzira inokurumidza, inonakidza, uye yakapusa.
Edza izvozvi: iMovie
Iyi iApple yakavakirwa-muMail app. Icho chiri kure nekukwana, asi ichiri imwe yesarudzo dzakanakisisa kunze uko. Iyo inotorova iyo Gmail app, mune edu maonero.
Edza izvozvi: Apple Email
Mapeji emahara izwi processor inogadzirwa naApple. Inowanikwa pane ese maApple majaira uye ma syncs kuICloud, kuti ugone kuenderera nekugadzirisa pane chero chinhu.
Edza izvozvi: Apple Pages
Apple's yega vhezheni yeMicrosoft Excel ipurogiramu yespredishiti yakanakira iyo yakagadzirirwa nharembozha ruzivo uye yakasununguka kushandisa.
Edza izvozvi: Apple Numbers
Inotevera kumusoro ndeye Apple's vhezheni yeMicrosoft PowerPoint. Iyo yemahara Anwendung yakavakwa kubva pasi kumusoro kune nhare. Uye zvinogadzira kugadzirwa kwehunyanzvi - yakazara nemachati ehupenyu uye shanduko yesinema - yakapusa.
Edza izvozvi: Apple keyword
Izwi ndiyo chiyero chegoridhe chemazwi processors uye chinowanzoshandiswa pabasa. Asi zvinoda kunyoreswa kweHofisi 365 pane iyo iPhone.
Edza izvozvi: Microsoft Word
Excel ingangove inonyanya kufarirwa spreadsheet app munyika - inoshandiswa mumabhizinesi uye zvikoro pasirese. Asi inoda Hofisi 365 sub.
Edza izvozvi: Microsoft Excel
NePowerPoint, unogona kukurumidza kugadzira, kugadzirisa, kutarisa, kupa kana kugovanisa mharidzo nekukurumidza. Zvekare, iwe unoda sehofisi 365 kunyoreswa.
Edza izvozvi: Microsoft PowerPoint
Zvichitaurwa zviri nyore, Docs ndeye gore-rakavakirwa imwe nzira kune Shoko. Iishandise kugadzira, kugadzirisa, kuchengetedza, uye kunyangwe kubatana pamagwaro uchiri kuenda.
Edza izvozvi: Google Docs
Mashiti ndiyo gore-yakavakirwa neimwe nzira kune Excel. Iishandise kugadzira, kugadzirisa, kuchengetedza, uye kunyangwe kubatana pamapepa ekuparadzira apo iwe uri kuenda.
Edza izvozvi: Google Sheetsiti
Masiraidhi ndeye gore-rakavakirwa imwe nzira kune Powerpoint. Iishandise kugadzira, kugadzirisa, uye kubatana nevamwe pazviratidziro kubva kune yako iPhone.
Edza izvozvi: Google Slideshi
Google inzvimbo ine simba mune yekugadzira uye yekubatana nzvimbo, uye Khalenda ndiyo muenzaniso mukuru. Iyo inokutendera kuti utarise, kuronga, kuwiriranisa purogiramu yako pane mapuratifomu nemidziyo. Iwe unogona zvakare kugadzira timu Kendari kuti ugovane nevamwe.
Edza izvozvi: Google Calendar
Kana iwe uchivenga Safari, funga kuyedza Chrome, kunyanya kana iwe ukashandisa iyo desktop desktop. Iyo bhurawuza ine simba inobvumirana pane ako ese mafaera.
Edza izvozvi: Google Chrome
Evernote iyi yakakurumbira chinyorwa app. Iwe unogona kuisa typed zvinyorwa kana kuongorora zvinyorwa zvakanyorwa nemaoko. Iwe unogona zvakare kuwedzera kune-kuita, mapikicha, mifananidzo, mapeji ewebhu, kana kudhindwa, uye inowirirana pane ako ese zvishandiso, saka ruzivo rwako rwunogara runewe.
Edza izvozvi: Evernote
Focus Focus Keeper
Focus Muchengeti anokubatsira iwe "chengetedza yako kugadzirwa yakakwira kudzivirira kuneta uchishandisa iyo timer". Iyo poindi ndeyekubatsira iwe kushanda nenguva - kwete kupokana nazvo!
Edza izvozvi: Focus Focus Keeper
Kana iwe usiri kuda kushandisa Apple Mail, funga Spark. Iyo inokutendera iwe kukurukura maemail zvakavanzika nemapoka mune tambo, kuronga maemail, kupinda kwekubatanidzwa senge Dropbox, shandisa yakavakirwa-mukati khalendari, uye gadzira zvinongedzo kune yakatarwa email kana tambo.
Edza izvozvi: chimvari
Todoist yakafanana neyeuchidzo app iyo inokubatsira kuti urambe uchitevedzera zvese zvese, chero kupi. Kunyangwe paunenge usiri wekunze. Iyo inopa zvakare kuwana pamusoro peanopfuura makumi matanhatu eapps ekubatanidzwa, kusanganisira Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT, uye Slack.
Edza izvozvi: Todoist
Wunderlist ndeimwe yeku-ita runyorwa uye task maneja app. Inoita kuti zvive nyore kutora, kugovana, uye kupedzisa mabasa, kunyangwe chishandiso chauri kushandisa.
Edza izvozvi: Wunderlist
Facebook inenge isingadi kuiswa. Iyo ingangove inonyanya kufarirwa pasocial network pasirese. Iishandise kubatana neshamwari, dzekare uye nyowani. Kana, chishandise kuona kushambadzira kwakavanzika uye memes kubva kune vanopindira vanoparadzira propaganda.
Edza izvozvi: Facebook
Instagram, Facebook-inomiririra app, inzvimbo yekudyidzana ndeye zvese zvekugovana mafoto, mavhidhiyo uye nyaya. Uye kuve uine huwandu hwakawanda hwevateveri.
Edza izvozvi: Instagram
LinkedIn ndeye social network yevanamazvikokota. Iyo inokubatsira iwe kuvaka online kutangazve, tsvaga mabasa, network, uye zvimwe. Iyo zvakare ndeyeMicrosoft.
Edza izvozvi: LinkedIn
Iyi ndiyo mecca yeDIYers. Unoda kuitisa muromo kubaya? Tarisa. Unoda Halloween pati yemubato? Tarisa. Iwe unogona kuongorora anopfuura zana emabhiriyoni emapini echikamu chehupenyu hwako hwese, uye ugadzire mamodhi mabhodhi kutarisa kumashure kuti uwane kurudziro.
Edza izvozvi: Pinterest
Tsvaga misoro yekutenderera yepamusoro, nhau dzinoputsa, mavhidhiyo emavhidhiyo, majee ekuseka, uye memes inopisa neiyo Reddit app yepamutemo.
Edza izvozvi: Reddit
Snapchat yakafanana neiyo Instagram mune iyo ine nyaya ficha, asi zvakaitirwa kutumira nekukurumidza snaps kushamwari dzinodzima zvachose kana dzangoonekwa, kunyangwe iye anotumira anogona kugara achivachengetera kukiya yavo kuti vazoona gare gare.
Edza izvozvi: Snapchat
Iro basa reTikTok nderekuti vashandisi vanogona kuseta mavhidhiyo ewavo lip-syncing kana kuita kunze kwematehwe. Mavhidhiyo avo anokwanisa kusvika pamasekondi gumi nemashanu akareba, uye vanogona kutora kubva kuraibhurari yenziyo, mhedzisiro, uye kurira kunonzwika kuwedzera kune mavhidhiyo avo.
Edza izvozvi: TikTok
Ah, hapwa ine chepfu yeinternet. Unoda kuona izvo Mutungamiri weUS ari tweeting? Ko zvakadii naKim K kana waunoda CNN anchor? Izvo zvese zviri pano, mune chaiyo-nguva, isina kumbobvira mafirita munzvimbo. Uyai netoll-kurudyi trolls!
Edza izvozvi: Twitter
Kanganwa mahotera. Ivo anodhura uye mutengo wakasungwa. Pane kudaro, shandisa Airbnb kuti uwane yakachipa yekubhadhara zororo, kana kutanga kuwana mari semugamuchiri.
Edza izvozvi: Airbnb
Google Mepu ndiyo chete mamapu app yaunoda. Ine nyika dzinopfuura mazana maviri nenzvimbo dzakatarwa uye mazana emamirioni emabhizinesi nenzvimbo pamepu, unogona kuwana chaiyo-nguva GPS kungofamba, traffic, uye chaiyo yekufambisa info.
Edza izvozvi: Google Maps
Ichi chishandiso chinoshandisa AI kukubatsira kuchengetedza pane yako inotevera kubhururuka kana hotera rwendo. Iyo inogona kufanotaura remangwana rekunofamba nendege uye mitengo yehotera. Vachaenda kumusoro kana pasi? Tsvaga rwendo rwako, wobva washandisa iyo Yekutarisa kuti uwane ziviso kana mitengo yadonha.
Edza izvozvi: Hopper
Unoda kusimudzwa here? Edza Lyft kuti ufambe. Iyo tekisi sevhisi kana carpool, uko vatyairi vanogona kuve chero munhu kubva kugweta kumupurisa achiedza kuwana zvimwe parutivi.
Edza izvozvi: Lyft
Uber yakangofanana neLyft. Saka, kana iwe usingakwanise kuwana mutyairi ari padyo neLyft, vhura Uber uye woedza izvo seimwe nzira.
Edza izvozvi: ber
Kana iwe uchifamba, unofanirwa kushandisa TripAdvisor kuti uwane ongororo, mapikicha, uye mepu nezve kwaunoenda. Iyo ine pamusoro pe500 mamirioni wongororo uye maonero.
Edza izvozvi: TripAdviser
Google-inove yeWaze inokuudza pakarepo nezve traffic, kuvaka, mapurisa, kuparara, nezvimwe, nekuda kweiyo inotonhorera yekushambadzira technology.
Edza izvozvi: Waze
Yelp inoita kuti iwe uwane chikafu chemuno, mabhizinesi, uye masevhisi, ane ongororo yemamirioni 135 inowanikwa kuti ikubatsire kuita sarudzo ine ruzivo.
Edza izvozvi: Yelp
Apple Mamiriro ekunze
Nepurogiramu yeMamiriro ekunze, Apple pachayo, unogona kutarisa mamiriro ekunze nezita reguta, kero yepositi kana zip kodhi, uye kodhi yendege.
Edza izvozvi: Apple Mamiriro ekunze
Karoti Mamiriro ekunze
Ichi chishandiso chinoshandisa dima reDenga rechokwadi rakanyanyisa dhata, asi inowedzera musika wehunhu. Kukurukurirana kwaCarrot, mavara uye shanduko yemafashama inzira inonakidza yekuwana zvazvino, kweawa, uye mafungidziro ezuva nezuva.
Edza izvozvi: Karoti Mamiriro ekunze
Ichitaura nezve Rima Denga, rinoti "ndiyo chaiyo sosi yemamiriro ekunze e hyperlocal", ine fungidziro pasi-kusvika-iyo-miniti uye mifananidzo yakanaka yemamiriro ekunze uye kuteedzerwa kwedutu chaiko.
Edza izvozvi: Dark Sky
Filed Under: cathaoireacha ar cíos tsamba
Ungatsvaga Sei PaGoogle Uchishandisa Image kana Vhidhiyo
[Kushanda] Regedza Kufona Rekodhi Yambiro pane OnePlus 8T, OnePlus 9, 9R, 9 Pro, uye Nord